Global Voices teny Malagasy » Mozambika: Adihevitra mikasika ny fanoratana anarana amin’ny karatra SIM · Global Voices teny Malagasy » Print
Mozambika: Adihevitra mikasika ny fanoratana anarana amin'ny karatra SIM
Voadika ny 12 Marsa 2019 5:13 GMT 1	 · Mpanoratra Janet Gunter Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Mozambika, Fitsipika, Mediam-bahoaka, Solovava, GV Mpisolovava
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2010)
Fotoana fohy taorian'ireo hetsi-panoherana  niseho tamin'ny volana Septambra tany Maputo izay nokarakaraina tamin'ny alalan'ny SMS , navoakan'ny governemanta Mozambikana ny didy Ministerialy izay manery ireo mpampiasa finday naloa mialoha tao amin'ireo tambajotra nasionaly roa mba hanoratra ireo karatra SIM-ny ao anatin'ny volana iray taorian'ny namoahana ilay lalàna. Noraisina ity fanapahankevitra ity taorian’ny nampiharan'ny governemanta tsindry tamin'ireo mpanome tolotra ireo mba hameran'izy ireo ny tolotra ho an'ireo mpanjifa mampiasa fahana naloa mialoha, nandritra ny fotoana nisehoan'ireo herisetra .
Raha toa ka miresaka mikasika ny ”fanaovana heloka bevava” amin'ny ankapobeny ny governemanta, mandroso hevitra kosa ireo blaogera fa manempotra bebe kokoa ireo hetsi-bahoaka vaovao rehetra karakaraina amin'ny SMS ity fepetra ity. Nanoratra tao anatina fanehoankevitra teo amin'ny blaoginy  i Reflectindo sobre Moçambique:
Ity manaraka ity no fanontaniana tokony hapetratsika: nahoana no taorian'ny hetsi-panoherana nokarakaraina tamin'ny SMS vao manapa-kevitra ny hanakana ireo tolotra amin'ny finday ny governemanta? Nahoana no tsy nataony izany rehefa norahonana tamin'ny SMS ny Solombavambahoaka José Mascarenhas ary avy eo novonoina?
Manana mpisoratra anarana amin'ny finday eo amin'ny 5,5 tapitrisa i Mozambika, amin'ny mponina miisa 21 tapitrisa. Tany am-boalohany, nandrahona ny hanapaka ny tolotra ho an'ireo olona tsy nisoratra anarana talohan'ny fetra farany tamin'ny 15 Novambra ireo manam-pahefana.
Tamin'ny faran'ny volana Novambra, kely dia kely ny isanjaton'ireo tonga nanoratra ny anarany, izay nilàna ny dika mitovy amin'ny karapanondro manankery. Tsy misy afa-tsy ireo orinasa roa mpanome tolotra ihany no afaka manao izany, Mcel et Vodacom, ary ireo masoivohony ara-barotra sy mpaninjarany ofisialy. Manana birao vitsivitsy ihany ny faritany sasany mba handray an-tànana ireo mpanjifa an-tapitrisa. Ankehitriny dia miaraka miasa amin'ny Biraon'ny Paositra sy Fifandraisandavitra ao Mozambika izy ireo mba hanakaikezana bebe kokoa ireo mpanjifa.
Nitaraina mikasika ny fetra andro tamin'ny faran'ny volana Novambra, tao amin'ny onjam-peon'ny maraina , i Benjamim Fernandes, Filohan'ny Fampandehanana Ara-barotry ny Mcel ary toa tao anatin'ny efatra ora, nivory ireo mpanana petrabola rehetra ary nangataka ny fialàny. Naneho hevitra  ny Blaogera Chauque [Pt] fa nidaraboka noho ny ”fifanandrinana tamin'ny Biraon'ny Fitantanana sy ny fitapitaka ambadika i Fernandes”.
Naneho ny tsy fahafaliany manoloana ity fepetra ity i Vodacom, tamin'ny fihaonany tamin'ny DECOM, vondrona mpiaro ireo mpanjifa. Ao amin'ny tranonkalany, notanisain'ny DECOM ny filazana ara-dalàna avy ao amin'ny vondrona mpiady amin'ny kolikoly, Center for Public Integrity (CIP) tamin'ny fametraham-panontaniana mikasika ny maha-araka lalampanorenana ilay Didy
Nas competências, atribuições e funções do Ministério dos Transportes e Comunicações (…) unicamente compete regular as actividades sob sua tutela, mas não impor obrigações ou restrições de direitos aos cidadãos em geral
Ny mandrindra ireo asa ambanin'ny masony irery ihany no andraikitra sy asan'ny Minisitry ny Fitaterana sy ny Serasera, fa tsy ny hametraka andraikitra na faneriterena amin'ny zon'ireo olontsotra amin'ny ankapobeny.
Nitarina ho hatramin'ny 7 Janoary 2011 ny farany fanoratana anarana ny SIM any Mozambika.
Raha toa ka mihamafàna any Etazonia ny fanontaniana mikasika ny ”tsy fitanilàn'ny aterineto”, mifono lanjany mitovy amin'izany any amin'ny faritra maro ao Afrika ambanin'i Sahara ny fanontaniana mikasika ny fidirana malalaka amin'ny finday. Ankoatra ny toekarena vao misondrotra toy ny an'i Afrika Atsimo sy i Nizeria, efa samy nanao ny fanoratana anarana ny SIM ho zavatra tsy maintsy atao avokoa ireo firenena hafa toa an'i Tanzania, Botswana, Kamerona. Firenena maro no mieritreritra ny hanao izany amin'ny 2011.
Any amin'ny firenena toa an'i Mozambika, nasehon'ireo hetsika niseho vao haingana ny fiatrehana famoretana ara-politika manjo ireo mpandrindra, ary noho izany, ireo mpandraharaha. Mbola aloha be loatra izao hanombanana ny fiantraikan'ny fanoratana ny karatra SIM eo amin'ny fahalalahana maneho hevitra, na koa hoe hahatonga ny fampiasana finday ho lafo be loatra na tsy natao ho an'ireo mahantra, indrindra fa ireo any amin'ny faritra ambanivohitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/12/133542/
 ny nampiharan'ny governemanta tsindry tamin'ireo mpanome tolotra ireo mba hameran'izy ireo ny tolotra ho an'ireo mpanjifa mampiasa fahana naloa mialoha, nandritra ny fotoana nisehoan'ireo herisetra: https://mg.globalvoices.org/2010/09/21/9294/
 Nanoratra tao anatina fanehoankevitra teo amin'ny blaoginy: http://comunidademocambicana.blogspot.com/2010/09/cartoes-pre-pagos-so-para-maiores-de-14.html?showComment=1285774193740#c725692414836597572
 Nitaraina mikasika ny fetra andro tamin'ny faran'ny volana Novambra, tao amin'ny onjam-peon'ny maraina: http://www.opais.co.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/10930-accionistas-da-mcel-mandam-cessar-funcoes-administrador-comercial.html
 Naneho hevitra: http://eagora-chauque.blogspot.com/2010/11/accionistas-da-mcel-mandam-cessar.html
 ny filazana ara-dalàna avy ao amin'ny vondrona mpiady amin'ny kolikoly, Center for Public Integrity : http://www.decom.org.mz/2010/11/registo-de-cartoes-sim-e-ilegal-e-anticonstitucional-cip/